Qormooyinka 'COVID-19' waa kuwo baahsan, oo dalabka ku-tallaalida sambabka ee Maraykanka ayaa cirka isku sii shareeraya
Qeybta daryeelka degdega ah ee Xarunta Caafimaadka ee California. ABC News ayaa soo warisay in Joshua Garza, oo ah nin 43 jir ah oo reer Texas ah, uu qalliinka sambabka looga beddelay laba jeer maadaama uu ku dhacay COVID-19. Wuxuu u maleynayay inuusan u baahnayn in laga tallaalo COVID-19. Hadda, wuxuu ugu baaqay dadka inay is tallaalaan, ...
Seddex sababood oo loo xirto maaskarada ka dib tallaalka tallaalka COVID-19-19
Muddo bilo ah, waxaad dalbaneysay inaad wax iibsato, aadna baajiso qorshooyinkaaga safarka, isla markaana aad dhex dhexaadiso shaashadda elektiroonigga ah. Waad ku farxi kartaa markii aad ogaato inaad xor noqon karto ka dib marka lagu tallaalo COVID-19-19. Si kastaba ha noqotee, arrimuhu ma aha kuwa fudud… “Pfizer’s iyo ModernaR ...
Heerka tallaalka ee Boqortooyada Midowday waa ku dhowaad 60%, welina way adag tahay in la joojiyo faafitaanka fayraska la beddelay
Sida laga soo xigtay warbixinta anshaxa, COVID-19 ayaa si isdaba joog ah ugu daciiftay Jarmalka dhawaanahan. Laga bilaabo 9 maalmood, heerka infekshinka Jarmalka wuxuu hoos ugu dhacay 23 maalmood 7dii maalmood ee la soo dhaafay. Gobollada federaalku waxay soo saareen tallaabooyin dhowr ah oo lagu furayo, sida dib-u-soo-celinta barashada fool-ka-foolka, baabi'inta o ...
In ka badan 300,000 oo xaaladood ayaa sii kordheysa, qolka gubida ayaa curyaan ah, oksijiinta ayaa ku dhow inay dhammaato, Hindiyana waxay noqotay xarunta cudurrada faafa adduunka (COVID-19)
Dhawaan, xaaladaha faafa ee adduunka ayaa u muuqda mid xasilloon, laakiin hal waddan ayaa wali ka sii daraya qulqulatada, iyada oo in ka badan 300,000 xaaladood ay sii kordhayaan, nidaamka caafimaadka qarankuna wuxuu ku dhow yahay inuu burburo. Dalkani waa- Hindiya. Waxaa jira gabaabsi goobaha gubida iyo xaabada i ...
Mawjadda saddexaad ee cudurrada faafa ayaa imanaya! Miyaad tixgelinaysaa inaad markale xirto magaalada?
Markii uu ku faafay fayraska isbedelay, mawjadda saddexaad ee cudurrada faafa ee Yurub ayaa imanaya. Wadamo badan ayaa dib u bilaabay tallaabooyinka xayiraadda. Wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa sheegay 27-ka in wareega cusub ee "xiritaanka magaalada" laga fiirsanayo. Laga soo bilaabo 27th, tirada kiis cusub oo la xaqiijiyay ...
Zhong nanshan: ma cirib tiri karo horyaallada cusub laakiin waa la xakameyn karaa
Ma jiro waddan ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada hantiyi kara. Dabayaaqadii Maarso 2, aqoon-isweydaarsi caalami ah oo khabiir ku ah kahortagga iyo xakamaynta cudurrada, zhong iyo khabiirada caanka ah ee faafa ee mareekanka ee fauci, waxay ka wada hadlaan mowduucyada sida iskaashiga iska caabinta cudurrada adduunka. Zho ...
COVIDBLE COVID-19: iibiyeyaashii hore ee caalamiga ahaa ee Iiraan ayaa u dhintay COVID-19 dartiis, da'da 45
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka jamhuuriyada Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegtay in ciyaartoydii hore ee xulka qaranka kubada cagta Iran laga yaabo inay iibiyaan qasnadaha sababtoo ah COVID-19 oof wareenka 21-kii Janaayo, isbitaal daryeel degdeg ah ayaa loo qaaday caasimada Tehran. 27-kii Janaayo habeenkii, iibiyeyaasha mina ayaa dhintay ka dib, da'da ...
Dhakhtarku wuxuu yidhi: COVID - 19 dhaawaca sambabaha ayaa ka daran sigaarka
Dhakhtar qalliin dhaawac ah tan iyo markii loo socday si loogu daaweeyo bukaanada kumanaan coronavirus, ayay ka digtay in hunguriga xun uu saameyn ku yeelan karo dad badan oo ka badbaaday COVID - 19. Brittany, class g DE Kendall (Brittany Bankhad Kendall) ayaa ku soo qoray twitter, Dr COVID - 19 sanbabada kadib ”Wuxuu umuuqdaa mid kafiican sidii aan ...
Booliiska Faransiiska ayaa xiray xafladaha damaashaadka kadib markii ay ku xad gudbeen xayiraadaha loo yaqaan 'covid-19'
Booliska Faransiiska waxay xireen xafladaha xafladaha carnival ka dib markii ay ku xadgudbeen xayiraadaha loo yaqaan '19-xayiraadaha' boqolaal boliis Faransiis ah ayaa Sabtidii xidhay xaflad sharci darro ah oo lagu qabanayo xaflada Carnival ee waqooyiga-galbeed ee Faransiiska tan iyo sanadkii cusub ee Eve, iyadoo la iska indhatirayo bandowga iyo xaddidaadaha coronavirus ee dhinacyada waaweyn. Waxyar kadib xafladii oo bilaabatay ...
XIRASHADA WAJIGA WAJIGU WAA MUHIIM IYO BILAASH.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela merkel natiijooyinka cusub ee baaritaanka virus taajka wadahadalka marolon laba geesoodka Marolon iyo Angela merkel ayaa kaqeybgalay howlo. Shabakad dibadeed markay ahayd Diisambar 17, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay shabakadda dayax gacmeedka Ruushka, dowladda Jarmalka ayaa 17kii sheegtay, ka dib shirkii EU, Germ ...
Maxaad Tahay Inaad Ogaato Kahor Iibsashada Wajiyadaha Ilaalinta ee KN95
Raacitaanka tilmaamahan ku saabsan adeegsiga iyo tuurista maaskarada wajiga neefsashada ee difaaca ee KN95 ayaa muhiim u ah ilaalinta caafimaadkaaga iyo tan bulshadaada. Haddii qalabka neefsashada ee KN95 uu waxyeello gaadhay ama uu nijaasoobay, ama haddii neefsashadu adkaato, waa inaad ka saartaa qalabka neefsiga, iska tuur qalabka ...
Qalabka ilaalinta qofka
CE Dardaaranka Qalabka Gaarka ah ee Shakhsiyeed ee 'PPE' waa soo gaabinta qalabka ilaalinta shakhsiyeed. Lambarka hore ee dardaaranku waa 89/686 / EEC, kii ugu dambeeyayna waa 2016 / 425. Midowga Yurub iyo aagga dhaqaalaha Yurub, iibinta qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed (PPE) waa inay u hoggaansamaan ...
Kunshan Gubang Qalabka Ilaalinta Teknolojiyada Co., Ltd.Cinwaanka: Dhismaha 13, No.169 Wadada Shimeng, Qiandeng Town, Magaalada Kunshan, Jiangsu, Shiinaha